NdinguWalrus nguBeatles - Izinto Zobugcisa
UJohn Lennon ubhale le ngoma. Njengoko kuchaziwe kwiDVD Ukuqulunqwa kweNgoma yeeNgoma zeBeatles , UJohn wayephosa kunye iingoma ezingenangqondo ukuba azihlekise kunye neentloko zabaphengululi bezama ukusasaza iingoma zeBeatles. Bakwakhankanya ukuba yimpendulo kaJohn kuBob Dylan 'yokubaleka' nendlela yokubhala yengoma. Lennon uxelele Umdlali odlalayo Kwiminyaka kamva ukuba 'ndingabhala naloo nto,' ekunqabile ukukhankanywa ngokunxulumene nale ngoma.
U-Lennon wachaza imvelaphi yale ngoma ngo-1980 Umdlali odlalayo Udliwanondlebe: 'Umgca wokuqala ubhalwe kuhambo olunye lweasidi kwimpelaveki enye. Umgca wesibini wabhalwa kuhambo olulandelayo lweasidi kwimpelaveki elandelayo, kwaye wagcwaliswa emva kokuba ndidibene noYoko. Inxalenye yayo yayibeka phantsi iHare Krishna. Bonke aba bantu bebeqhubeka malunga ne-Hare Krishna, i-Allen Ginsberg ngakumbi. Isalathiso 'se-Element'ry penguin' sisimo sengqondo esisiseko, esingenabuchule sokuhamba ucula, 'Hare Krishna,' okanye ubeke lonke ukholo lwakho kuso nasiphi na isithixo. Ndabhala ngokungacacanga, la Dylan, ngaloo mihla. '
U-Lennon wafumana umbono wengoma ye-oblique xa wayefumana ileta evela kumfundi owayechaza ukuba utitshala wakhe wesiNgesi wayeneklasi ehlalutya iingoma zeBeatles. ULennon wayiphendula le leta; Impendulo yakhe yathengiswa njengezikhumbuzo kwifandesi ka-1992.
UEmery -San Jose, CA
Amazwi ekupheleni kwengoma avela kusasazo lwe-BBC lomdlalo kaShakespeare UKumkani uLear , athe uJohn Lennon weva xa wavula unomathotholo ngelixa babesebenza kwingoma. Ugqibe kwelokuba adibanise izingxobo zosasazo kwingoma, kukhokelela kwincoko emileyo engadibaniyo yencoko.
Icandelo le UKumkani uLear Ukusetyenziswa kwavela kuMthetho weSine, isiQendu 6, kunye no-Oswald esithi: 'Khoboka, undibulele. Villain, thatha isipaji sam, 'esiza ngo-3: 52 uphawu. Emva kokuba u-Oswald eswelekile, esiva le ncoko:
U-Edgar: 'Ndiyakwazi kakuhle: umntu osebenzayo, Njengobubi kwizenzo zenkosikazi yakho Njengokuba ububi bunqwenela.'
UGloucester: 'Yintoni, ufile?'
UEdgar: 'Hlala phantsi, tata. Phumla wena. '
Uluvo lukaWalrus luvela kumbongo UWalrus kunye noMchweli , Evela kwi-sequel ukuya kwi UAlice kwiWonderland kubizwe Ngokujonga iglasi . Ngo-1980 Umdlali odlalayo Udliwanondlebe, u-Lennon uthe: 'Akuzange kuvele kum ukuba u-Lewis Carroll ebephawula ngengxowa-nkulu nakwinkqubo yentlalo. Khange ndingene kuloo nto malunga noko wayethetha kona, njengabantu abenza nomsebenzi weBeatles. Emva kwexesha, ndiye ndabuya ndayijonga ndaqonda ukuba i-walrus yayingumntu ombi ebalini kwaye umchweli wayengumfo olungileyo. Ndacinga, Owu, s, ndikhethe umntu ongalunganga. Kwakufanele ukuba ndathi, 'Ndingumchweli.' Kodwa leyo ibingazukufana, andithi? '
Xa uLennon ethathe isigqibo sokubhala iingoma ezididayo, wacela umhlobo wakhe uPete Shotton isicengcelezo esasicula. UShadon wabanika le ngoma, leyo uLennon wayifaka kwingoma:
Ukugcinwa kwemibala etyheli, ipayi eluhlaza eluhlaza
Zonke zixutywe kunye neliso lenja efileyo
Yibethe endaweni encinci, ishumi leenyawo
Emva koko yihlambe yonke ngekomityi yokugula ebandayo
Umgca wokuvula wengoma, 'Ndinguye njengokuba unjalo njengokuba unje kwaye sonke sikunye' isekwe kwingoma ethi 'Ukumatsha ukuya ePitoli,' equlathe ingoma, 'Ndikunye nawe kwaye nawe mna kwaye sonke sikunye. '
Ikwayala ekugqibeleni iyacula, 'Oompah, oompah, yincamathisele kwiskipa sakho' kwaye 'Wonke umntu unenye, wonke umntu unayo.'
Le ngoma yanceda ukunyusa amahemuhemu ukuba uPaul McCartney ufile. Kulula kakhulu, kodwa ii-theorists zifumene ezi zikhokelo kumagama, akukho nanye kuzo eqinisekisiweyo:
'Ukulinda iveni ukuba ize' kuthetha ukuba iiBeatles ezintathu esele zilinde iveni yamapolisa ukuba ize. 'Amapolisa amancinci ngokulandelelana' kuthetha ukuba amapolisa afikile.
'Goo goo ga joob' yayingamazwi okugqibela awathethwa nguHumpty Dumpty ngaphambi kokuba awe eludongeni afe.
Ngexesha lokuphela, ngelixa ikwayara icula, ilizwi lithi 'Ndingcwabe' yinto uPawulos awayenokuyithetha emva kokuba efile.
Ngexesha lokuphela, siva umntu efunda indawo yokufa kumdlalo kaShakespeare othi 'King Lear.'
Ukongeza, kwavakala amarhe okuba uWalrus wayengumGrike ngokuba 'sisidumbu' (ayisiyiyo) ngesiGrike, yiyo loo nto abantu babecinga ukuba uPawulos nguWalrus. Kwakhona, kwividiyo, i-walrus yayiyiyo kuphela indleko emnyama.
I-BBC ikuvalile oku kwimigca 'yobufundisikazi obungamanyala' kwaye 'yehlisa oogxa bakho.'
Oku kukhutshwe njengecala le-B ' Molweni Sala kakuhle , 'eyabhalwa nguPaul McCartney. Oku kwamcaphukisa uLennon kuba wayeziva ukuba oku kubhetele.
Kwingoma yeBeatles ethi 'Glass Onion,' uLennon wacula, 'UWalrus wayenguPaul.' Wayifumana indlela abantu abazama ngayo ukutolika amazwi akhe kwaye baqonde ukuba ngubani uWalrus.
U-Lennon wafumana umgca 'Goo Goo Ga ​​Joob' ukusuka kwincwadi Ukuvuka kukaFinnegan NguJames Joyce. 'USemolina Pilchard' wayenguMcuphi uSergeant Norman Pilcher, intloko yecandelo leziyobisi laseScotland Yard. Wakhokelela ekubanjweni kukaJohn Lennon kunye noBrian Jones ngaphambi kokuba aziphande ngokwakhe ngokukhohlisa nokunyotywa kwii-70s.
Matt - London, eNgilani
U-Eric Burdon (wezilwanyana kunye nodumo lweMfazwe) wathi kwibhayiloji yakhe ukuba uyiNdoda yeqanda. Kubonakala ngathi uxelele uJohn Lennon ngamava ezesondo ukuba wayebandakanyekile apho iqanda lalidlala khona. Emva koko, uJohn wambiza ngokuba liQanda lomntu.
Ingoma kaELO ethi 'Molo Mhlobo Wam Omdala' inendlela efanayo nale - iphantse ibe sisandi esifanayo kunye neokhestra kodwa amagama ahlukeneyo. Akumangalisi ukuba uJeff Lynne ngamanye amaxesha abizwa ngokuba yiBeatle yesithandathu.
Kwi Iingoma zeBeatles , intatheli uHunter Davies uyachaza ukuba wayekunye noJohn Lennon xa le ngoma yafika kuye okokuqala. Bebequbha echibini xa kukhala inhlabamkhosi yamapolisa ngaphandle. Yenze isigqi entlokweni kaLennon, kwaye kamva wongeza kweso siqendu amagama athi, 'Mist-er Cit-ee police-man ehleli entle.'
U-Lennon wabalisa eli bali linye kuJonathan Cott ngo-1968, esithi, 'bendinoluvo lokwenza ingoma eyayisilumkiso samapolisa, kodwa khange isebenze ekugqibeleni ... Awunakukwazi ukucula inhlabamkhosi yamapolisa. '
Kwisiqendu se IiSimps , 'I-Bart Of War,' ehamba ngoMeyi 18, 2003, uBart noMilhouse bangena kwigumbi elifihlakeleyo kwindlu yaseFlanders ukuze bafumanise ukuba uNed ungumxhasi weBeatles. U-Bart uthatha i-sip kwisitya seminyaka engama-40 ubudala seBeatles-themed novelty soda kwaye ucaphula le ngoma: 'Imicimbi ephuzi evuza kwiliso lenja efileyo,' ngelixa uMilhouse ethatha uhambo kwaye ebona iindidi ezahlukeneyo zeBeatles eziphefumlelweyo.
UStyx wayigquma le ngoma ngo-2004 kwaye wayenzela ividiyo yomculo nge-cameo evela kuBilly Bob Thornton. Bayidlale ku-Eric Clapton's Crossroads inzuzo ngaloo nyaka, bayifaka kuluhlu lwabo. Inguqulelo yabo ivela kwifayile yabo Inye nayo yonke into IDVD.
ICainlyn-Farmington Hills, MI
Emva kokuba uJohn Lennon ehambe yedwa, wabhala ingoma ebizwa ngokuba 'nguThixo' apho wayecula khona, 'Ndingu walrus, kodwa ngoku ndingu John.'
Amagcisa agubungele le ngoma abandakanya ukuKhokelwa ngamazwi, uJackyl, uPhil Lesh, Uthando / Inzondo, Amadoda angenazo iiHats, iOasis, iOingo Boingo, iSpooky Tooth kunye neStyx. AmaMilkmen afileyo arekhoda ingoma eyahlukileyo enesihloko esifanayo ngo-1987.
UFrank Zappa kunye noMama we-Invention benza le ngoma njengengxenye yee-70s zabo zakudala-ekuqaleni kwee-80 bahlala kwi-repertoire, beyinika unyango lwabo lwamahlaya. Yayiyintandokazi yabalandeli.
UBono uvuma le ngoma kwi-movie Kuwo wonke umhlaba , Ifilimu egxile kumculo weBeatles. Kwifilimu, udlala uGqirha Robert, ekwabhekiswa kwenye ingoma yeBeatles.
Le yayiyingoma yokuqala iiBeatles ezirekhodwe emva kokusweleka kukaBrian Epstein. Injineli uGeoff Emerick ukhumbule, 'imbonakalo yobuso babo xa babedlala.'
Ingoma kaJohn Lennon 'Ndiyalila ...
Kwi I-Anthology Ingoma yale ngoma, bazama ii-octave ezine kwi-intro. Ngaphambi nje kokuba uLennon athi, 'Ukuhlala kwisitiya saseNgilani silinde ilanga,' uRingo wenza izihlandlo ezibini kumgibe nakumgangatho womgangatho ngaphambi kokubetha.
Kwinoveli kaStephen King ka2001 Umleqi maphupha , ugqirha wezifo zengqondo ogama linguHenry Devlin ucula le nto njengoko ezama ukutshabalalisa isidudu sasemzini kunye namaqanda aso.
Ndiza kuba (i-500 yeemayile) iingoma
njengo frankie uthe ndiyenzile ngendlela yam
ngekhe uyeke oku kuziva
ndithathe indawo efihlakeleyo lyrics
brandy wena intombazana entle ujonge iglasi
Ujohn mayer umzimba wakho yingoma yeWondland